थाहा खबर: संविधान संशोधनमा नेकपाभित्रै विवाद, हल्ला चलाएर वामदेवलाई रोक्ने खेल
शक्तिशाली बन्‍न नेताबीच अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा
काठमाडौँ : सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)भित्र संविधान संशोधनको प्रस्तावले नयाँ विवाद जन्माएको छ।
शनिबार बसेको सचिवालय बैठकले संविधान संशोधन गरेर उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई प्रधानमन्त्री बन्‍ने बाटो खोल्न लागेको आशंकामा नेकपामा माथिदेखि तलसम्मै विवाद सुरु भएको हो।
मधेसकेन्द्रित दलले अगाडि सार्दै आएका बिषयहरु, प्रदेश तथा स्थानीय सरकार संचालनमा देखिएका समस्याका साथै राजनीतिक वृत्तमा उठिरहने प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतिको प्रावधानबारे गहिरो बहस हुन सकेकै छैन।
यता राष्ट्रियसभामा जानेलाई पनि प्रधानमन्त्री बनाउन सकिने कुरालाई संविधान संसोधनमार्फत सम्बोधन गर्न खोजिएपछि चर्को आलोचना भइरहेको छ।
अरु बिषयलाई ओझेलमा राखेर संविधान संशोधनमार्फत राष्ट्रियसभा सदस्यलाई प्रधानमन्त्री बनाउन समिति गठन गरिएको हल्लाले नेकपाभित्र तरंग छाएको छ।
गौतमलाई राष्ट्रियसभाबाट प्रधानमन्त्री बनाउने रणनीतिका साथ सचिवालय बैठकले संविधान संशोधन कार्यदल गठन गरेको हल्ला चलाइएको छ। वामदेवलाई अगाडि देखाएर दुवै अध्यक्ष अझै शक्तिशाली हुने दाउमा देखिएका छन्। पार्टी भित्र वामदेव शक्तिशाली हुने चिन्ताले इश्‍वर पोखरेल र सुवास नेम्वाङसम्मलाई पिरोलेको छ।
गौतमलाई मात्रै जोडेर प्रचार गरिँदा उनलाई अहिले नै रोक्ने प्रयासमा नेकपाका केही नेताहरु लागेका छन्। यसो भए उनका प्रतिस्पर्धी पोखरेल र नेम्वाङ मात्रै होइन ओली, दाहाल र नेपाललाई पनि वातावरण सहज बन्‍नेछ ।
ओलीपछि प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बन्‍न नमिल्ने परिस्थिति आएमा पूर्व एमालेबाट माधवकुमार नेपाललाई पनि पहिले प्रधानमन्त्री भइसकेको भन्दै विकल्पमा जानु पर्नेछ।
यसका लागि सभामुख भइसकेका नेम्वाङ वा हालका उपप्रधानमन्त्री पोखरेल भन्दा वामदेव सबैका लागि स्वीकार्य हुन सक्ने भएकोले त्रास बढेको देखिन्छ। त्यसमा पनि इश्र्वर पोखरेलले मध्यरातमा ट्विट गरेरै संविधान संशोधनको प्रसंगमा विरोध जनाइसकेका छन्।
संविधान संशोधनका लागि पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेता माधव नेपालको संयोजकत्वमा तीन सदस्य समिति गठन भएको बताइएकाे थियो।
नेता नेपालको संयोजकत्वमा स्थायी समिति सदस्य सुवासचन्द्र नेम्वाङ र पार्टी केन्द्रीय सदस्य खिमलाल देवकोटा सदस्य रहेको कार्यदल बनेको समाचार बाहिरिएपछि तीनै नेता सोमबार कोटेश्‍वरमा जम्मा भएका थिए।
संविधान संशोधन कार्यदलका सदस्य भनिएका नेम्वाङले कार्यदल गठनबारे आफूलाई जानकारी नभएको जिकिर गरेका। ‘सचिवालयले निर्णय गरेको होला। मैले मेरो नाम पनि जोडिएर मिडियामा समाचार आएपछि थाहा पाएँ। तर, मलाई त्यस बिषयमा जानकारी छैन’, उनले भने।
व्यक्तिलाई लिइएर संविधान संशोधन गर्ने प्रस्ताव ल्याएको प्रचार गरिएपछि नेकपाभित्र विवाद सिर्जना भएको हो। गौतमलाई पार्टी उपाध्यक्ष बनाउन नेकपाले यसअघि पार्टी विधानसमेत परिमार्जन गरेको थियो।
सचिवालय बैठकमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले संविधान संशोधन प्रस्ताव गरेका थिए। गौतमलाई राष्ट्रियसभामा लगेर प्रधानमन्त्री बनाउने बिषय चुहिएपछि नेकपाकै कार्यकर्ता नेतृत्वमाथि जाइलागेका छन्।
गौतम संविधान संशोधन गरेर राष्ट्रियसभाबाट प्रधानमन्त्री बन्‍ने बाटो खोल्ने शर्त राख्दै माघ ९ को निर्वाचनमा जान मानेका थिएनन्।राष्ट्रपतिबाट मनोनित भएका अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाको समय सकिएपछि बर्दियामा पराजित गौतमलाई लाने तयारी थियो।
प्रधानमन्त्री केपी ओली विश्वास पात्रका रुपमा चिनिएका अर्थमन्त्री खतिवडाको कार्यअवधि सकिएको अवस्थामा पुनः मौका दिने पक्षमा थिए। अध्यक्ष दाहालकै प्रस्तावमा गौतमलाई राष्ट्रियसभामा लगेर प्रधानमन्त्री बन्‍ने बाटो खुला गर्ने प्रस्ताव अघि बढाइएपछि नेताहरु आलोचनाका सिकार भएका छन्।
सचिवालय स्रोतका अनुसार अध्यक्ष दाहालले संविधान संशोधनका लागि कार्यदल गठन गर्ने प्रस्तावमा नेता नेपालले पनि समर्थन जनाएका थिए।
प्रचण्डको प्रस्तावमा नेता नेपालसँगै वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल, रामबहादुर थापा ‘बादल’ पनि समर्थन गरेका थिए। ओलीले तत्कालीन एमालेको अध्यक्ष हुने बेलामा र माओवादीसँग एकता गर्ने बेलामा वामदेवलाई आफूपछि प्रधानमन्त्री बन्‍न सहयोग गर्ने बचान दिइसकेका छन् । तर अहिले उनले प्रचण्ड ईश्‍वर र सुवास नेम्वाङलाईसमेत उनले उही कुराको आश्‍वासन दिएर फकाइरहेका छन्।
दाहालले प्रस्ताव ल्याएर सचिवालयमै अल्पमतमा पर्ने देखिएपछि ओली मौन थिए। अरु सदस्यले खुलेरै दाहालको प्रस्तावमा समर्थन गरे। तर ओलीनिकट मानिएका विष्णु पौडेल मौन थिए।
संविधान संशोधनका लागि कार्यदल बनाएको बताइरहँदा पार्टीमा जानकारी नभएको स्थायी कमिटी सदस्य पम्फा भूसाल बताउँछिन्। ‘पार्टी सचिवालयको निर्णय होला। तर, मलाई त्यसबारे आधिकारीक जानकारी छैन। बाहिर हल्ला सुनेको चाहिँ हो,’ उनले भनिन्।
यस्तै, नेकपाका प्रमुख सचेतक देव गुरुङले पनि संविधान संशोधनबारे आफुलाई पार्टीले जानकारी नगराएको बताए। ‘संविधान संशोधनका लागि कार्यदलले निर्णय गरेको भन्‍ने बाहिर चर्चा आएको छ। त्यस बिषयमा मलाई पनि जानकारी छैन,’ उनले भने।
नेकपाले संविधान संशोधन गरेर गौतमलाई राष्ट्रियसभाबाट प्रधानमन्त्री बनाउने रणनीतिसहित लिए पनि पार्टीका नेताहरुले जानकारी नभएको तर्क गरिरहेको छ।
ओली-दाहालको आफ्नै रणनीति
प्रधानमन्त्री ओली र अध्यक्ष दाहालले पार्टीभित्र शक्तिशालि बन्‍न आ-आफ्नो रणनिति तयार पारेको नेकपानिकट स्रोत बताउँछ। सभामुख चयनलाई लिएर अध्यक्ष दाहालको नेतृत्वमा गौतम निवास भैंसेपाटीमा भएको बैठकको तरङ्ग अझै ओली सशंकित छन्।
भैंसेपाटी भेलामा ओली र ओलीनिकटबाहेकका शीर्ष नेताहरु सहभागिता थिए। प्रधानमन्त्रीलाई एक्ल्याएर अध्यक्ष दाहाल केन्द्रित शक्तिशाली गुट बनाउने कोसिस नेकपामा भइरहेको छ।
त्यही रणनीति अनुसार अध्यक्ष दाहालले गौतमलाई राष्ट्रियसभामा लान संविधान संशोधनको प्रस्ताव ल्याएका हुन्। तर अन्त्यमा ओलीको अलोकप्रियता र गौतमको विरोध बढेमा दाहाल स्वयम् प्रधानमन्त्री हुन सक्ने सम्भावना देखिरहेका छन्।
नेकपाभित्रको पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमलाई नियाल्दा प्रधानमन्त्री ओली कमजोर बन्दै गएको देखिन्छ। सभामुख चयनदेखि अमेरिकी परियोजना एमसिसी हुदै संविधान संशोधनको प्रस्तावसम्ममा सचिवालयमै ओलीपक्ष कमजोर भएको छ। पार्टीभित्र प्रधानमन्त्री विरुद्धको रणनीति निरन्तर लागिरहँदा प्रधानमन्त्री ओलीले गृहजिल्ला झापा पुगेर एक कार्यक्रममा बताएका थिए।
‘अनेक जाल झेल संयन्त्रविरुद्ध संघर्ष गरिरहनुपरेको छ। जो देश विकास भएको देख्‍न चाहँदैन। त्यस्ता शक्तिहरूले रोक्न खोज्छन्। तपाईंहरूलाई लाग्ला बहुमत छ, बहुमत भए पनि फर्की फर्कीकन फेरि उनीहरू यो सरकारलाई असफल पार्ने। यसलाई ढाल्ने, यसलाई बदनाम गर्ने यी प्रयासमा कसरी लागिरहेका छन, तपाईंहरू देखिराख्नुभएको छ,’ प्रधानमन्त्री ओलीले भनेका थिए।
प्रधानमन्त्रीले आफैंले सरकार ढाल्ने त्राससहितको भनाई गृहजिल्लामा पुगेर राखेपछि राजनीतिक तरङ्ग पैदा भएको छ।
गौतमको राजनीति जीवनमा चुनाव नफापेको भए पनि उनी शक्तिको आकांक्षाबाट पछि हटेका छैन। केन्द्रीय कमिटीको बैठकले उपाध्यक्ष बनाएपछि गौतम पार्टीभित्र शक्तिशाली हुँदै आएका थिए।
तर संविधान संशोधनका लागि बनाएको कार्यदलमै विवाद निस्किएपछि उपाध्यक्ष गौतमको राष्ट्रियसभा हुँदै प्रधानमन्त्री बन्‍न सफलता प्राप्त नहुने संकेत देखिएको छ।
पार्टी एकतापछि गौतमले नेकपाको बलियो विभागमा गनिएको संगठन विभाग जिम्मेवारी पाएका थिए। एकपछि अर्को प्रयासबाट पार्टीभित्र शक्तिशाली बन्दै गएका गौतमको प्रधानमन्त्री बन्‍ने रणनीति छ। वि.सं. २०५१ सालताका उनी पार्टीको शक्तिशाली उपमहासचिव बनेका थिए।
राजनीतिक संक्रमणबीच बनेको संयुक्त सरकारमा पनि उनी पार्टीको नेतृत्व गर्दै उपप्रधानमन्त्री र शक्तिशाली गृहमन्त्री बनेका थिए। गौतमकै पहलमा दुई ठूला कम्युनिष्ट पार्टी एमाले र माओवादीबीच पार्टी एकता भएको बताइन्छ। भागबण्डा र गुटउपगुटको अभ्यासले निरन्तरता पाउँदा ओली र गौतमको सम्बन्ध त्यसपछि राम्रो हुन सकेको छैन।